FMM (Fanontaniana Mateti-pitranga) - Première Agence de Microfinance à Madagascar
FMM (Fanontaniana Mateti-pitranga)
Aiza no ahafahako mahafantatra misimisy kokoa mahakasika ny fampindramam-bola madinika ataon’ny PAMF?
Izay rehetra mahakasika ny fampindramambola ataon’ny PAMF dia azo avy amin’ireo masoivoho akaiky indrindra na miantso ny iray amin’ireo masoivoho misy anay ao amin’ny faritra misy anao ianao. Jereo eto ny lisitr’ireo masoivoho misy anay ahafahana mifandray.
Firy andro no ilaina ahazoana ny fanekena ny fangatahana findramam-bola?
Izany dia miankina amin’ny tolotra fampindramam-bola nosafidianao ary koa ny hafainganan’ny fanomezanao ireo andinindiny ilaina sy ny antontan-taratasy ilaina rehetra. Amin’ny ankapobeny, 3 andro fiasana aorian’ny fametrahana fangatahana izay misy ny antontan-taratasy feno no ahazoana ny valin’ny fangatahana findramam-bola latsaky ny 10.000.000 Ariary.
Ahoana ny fomba ikajiana ny tahan’ny zanabola?
Manolotra « taux d’intérêt dégressif » izahay, izany hoe: ny zanabola aloa dia kajiana isam-bolana araka ny ambin’ny renivola sy ny zanabola sisa nindramina anaty kaonty, ary ny famerenam-bola dia atao isam-bolana araka izay voafaritra anatin’ny tetikandro famerenam-bola.
Aiza no tokony hamerenako ny volako?
Ao amin’ny sampana fandoavam-bola eny anivon’ireo masoivohon’ny PAMF irery ihany no amerenan’ny mpanjifa mivantana ny vola nindramina. Raha tamin’ny alalan’ny m-kajy no nindramanao vola, amin’ny alalan’ny findainao mivantana no amerenanao ny vola nindramina.
Inona no mitranga raha manadino mamerim-bola ara-potoana aho?
Tahaka ireo orinasa mampindram-bola madinika hafa, ny PAMF dia mampihatra sazim-pahatarana arakaraky ny politika fampindramam-bolany, izany moa dia ampitaina sy voarakitra anatin’ny fifanarahana findramam-bola izay nosoniavin’ny mpanjifa. Ankoatr’izany, raha taraiky ny famerenam-bola, dia voarakitra ao amin’ny mombamomba ny mpanjifa izany ary misy fiantraikany ratsy eo amin’ny fangatahana findramam-bola amin’ny ho avy.
Ahoana ny fomba fanombanana fangatahana fampindramam-bola?
Ny PAMF dia miankina amina fepetra mazava rehefa manao fanadihadiana ny fangatahana findramam-bola. Jerena ao anatin’izany raha manaraka ny fepetra takian’ny fahafahana mindram-bola ianao, raha manombana ny fahafahanao mamerina vola ary manamarina fa manana ny antoka ilaina ianao, na tsia. Mazava ho azy fa izay mpanjifa manana antontan-taratasy feno sy mahafa-po tsara no afaka misitraka ny fampindramam-bola. Raha tsy mahafeno ireo fepetra 3 fototra ireo ny mpanjifa, dia tsy afaka mamaly ny fangatahana nataony ny PAMF.
Raha manana olana aho na misy fitarainana momba ny tolotra PAMF, iza no tokony hifandraisako?
Mamporisika anao izahay mba hifandray amin’ireto masoivoho akaiky anao eto.
Inona no andraikitry ny mpiara-miombon’antoka amin’ny mpindram-bola?
Ny mpiara-miombon’antoka amin’ny mpindram-bola dia ilaina hatrany amin’ny karazana findramam-bola rehetra. Ny mpiara-miombon’antoka dia ny vady raha manambady na ray aman-dreny akaiky ho an’ny mpitovo. Ny mpiara-miombon’antoka amin’ny mpindram-bola dia manaiky amin’ny PAMF fa hanatanteraka ny adidin’ny mpindram-bola raha toa ka misy ny tsy fahafahan’ity farany mamerim-bola.
Inona no andraikitry ny mpiantoka?
Ny mpiantoka dia manaiky amin’ny PAMF fa hanatanteraka ny adidin’ny mpindram-bola raha mitranga ny tsy fahafahan’ity farany mamerim-bola. Afaka manolotra antoka hafa famenony ho an’ny mpindram-bola ny mpiantoka ary mety ho olona tsotra na orinasa.
Inona ireo tolotra hafa omen’ny PAMF?
Manana tolotra petra-bola sy fakàna vola ampiasaina manerana ny Madagasikara amin’ny fotoana rehetra ny PAMF, amin’ny alalan’ny Mobile Money eny anivon’ny masoivohony rehetra avy.